amay by win nge - issuu
သားတို့ အိမြ် ပန်ကြရအောင် အမေ
“ပေါ့ရင် အရသာမရှိဘူး နဲ့ ဒီနေ့ချက်တာ နည်းနည်းငန်တော့ မျိုမကျဘူးတဲ့။ ဘယ်လလိုပ်ပေးရမလဲ” အိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်း ထမင်းစားခန်းမှ လွှင့်လာတဲ့အသံက ဆီးလို့ကြိုတယ်။ သားကို မြင်တော့ အမေက ခေါင်းငုံ့ပြီး ထမင်းဆက်စားတယ်။ မိန်းမက သူ့ကို မျက်စောင်းနဲ့ ကြည့်တယ်။ အမေစားနေတဲ့ ဟင်းကို သူ မြည်းကြည့်ပြီး ချက်ချင်း ထွေးထုတ်လကိုမိတယ်။ “အမေ့ရောဂါက အငန်နဲ့ မတည့်ဘူး လို့ ပြောထားတယ် မဟုတလ်ား” “ဒါဆို ရှင့်အမေကို ရှင်ပဲချက်ကျွေးပေါ့” ခြေဆောင့်ပြီး သူမ ထွက်သွားတယ်။
သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို သူခပ်ဖွဖွချရင်း... “အမေ.. အဲတာတွေ မစားနဲ့တော့.. သား ခေါက်ဆွဲချက်လိုကမ်ယ်” “သား... အမေကို သား ဘာပြောစရာရှိလ?ဲ ပြောစရာရှိတာ ပြောနော်သား..စိတ်ထဲထည့်မထားနဲ့” “နောက်လကျရင် သားရာထူးတက်ပြီ အမေ။ သား ဒီထက် ပိုအလုပ်များတော့မယ်။ အမေ့ချွေးမကလည်း အပြင်ထွက် အလုပလ်ုပ်ချင်တယ်တ.ဲ့ . ဒါကြောင်.့ . ”
သား ဘာကိုဆလိုချင်မနှ်း အမေသိလိုကတ်ယ်။ “သားရယ် အမေ့ကို လူအိုရုံ မပို့ပါနဲ့နော်” တိုး လျှိုးတောင်းပန်စွာ အမေဆိုတော့ သားစိတမ်ကောင်းဖြစ်ပြီး ခဏလောက် နှုတဆ်ိတသ်ွားတယ်။ “အမေ.. လူအိုရုံက မကောင်းတာ မဟုတဘ်ူး။ အမေ့ချွေးမ အလုပ်ရရင် အမေ့ကို ပြုစုဖို့အချိန် ရှိတော့မှာ မဟုတဘ်ူး။ လူအိုရုံမှာ အမေ့ကို ပြုစုမယ့်လူ၊ ချက်ကျွေးမယ့် ၀န်ထမ်းတွေရှိတယ် အမေ။ အိမ်မှာထက်စာရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ အမေရယ်” “ဒါပေမဲ.့ . သားရယ်...”
အမေ့စကားကို သူ မကြားချင်ဟန်ဆောင်ပြီး ရေချိုးခန်းဘက် ထွကလ်ာခဲ့တယ်။ သားအမိနှစ်ယောက် ခေါက်ဆွဲအတူစားပြီး စာကြည့်ခန်းထဲ သူဝင်ခဲ့တယ်။ ပြတင်းပေါက် အပြင်ဖက်ကို ငေးကြည့်ရင်း သူတွေဝေနေမိတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် မုဆိုးမဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမေ၊ သားကို လူတစ်လုးံ သူတစ်လုးံ ဖြစ်အောင် ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ အမေ၊ သားကို လူရာဝင်အောင် နိုင်ငံခြားအထိ ပညာသင်ခွင့် ပေးခဲ့တဲ့ အမေ.. သားကို ကြီးပြင်းအောင် ကျွေးမွေးအနစ်နာခံခဲ့တာကို အကြောင်းပြပြီး သားဆီက ဘာမှပြန်မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ အမေကို အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲဖို့ မိန်းမဆန္ဒကြောင့် လူအိုရုံပို့ရတော့မယ်။
သက်ပြင်းလေးလေးတစ်ချက် သူချလိက်ုမတိယ်။ သား ရင်ထဲမှာ မချိလိုကတ်ာအမေရယ်...
“မင်းရဲ့ လက်ကျန်ဘ၀ကို မင်းအမေက အဖော်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူး .. မင်းမိန်းမကပဲအဖော်ပြုမှာ” “မင်း အမေ အသက်ကြီးပြီကွာ။ နေလိရုရင် နောက်ထပ် ၄ . ၅ နှစ်ပေါ့။ အဲဒီ နှစတ်ိုတိုလေးမှာ အမေကို သေချာပြုစု ဂရုစိုကပ်ါကွာ။ မရှိတော့မှ ငါမကျွေးလိက်ုရပါလား? ငါ မမွေးလိုက်ရပါလားလို့ နောင်တမရနဲ့” ပတ်ဝန်းကျင်က သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတစ်ချို့ရဲ့ စကားသံကို ပြန်ကြားယောင်ရင်းသူရှေ့ဆက် မတွေးရဲတော့ဘူး။
အမေ့အတွက် ငွေကန်ုကြေးကျများရင် ဂရုစကိုရိုသေရာရောက်တယ်လို့ ထင်မယ်ဆလို ည်း ထင်ကြတော့။ တောင်စွယ်နေကွယလ်ုဆဲ ညနေခင်းတစ်ခု မြို့ပြင်မှာ တည်ထားတဲ့ လူအိုရုံဆီ သူတို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ လူအိုရုံရဲ့ဧည့်ခန်းကိုသတိူု့ဖြတ်လျှောက်တော့ ၄၂လက်မ တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ဟာသကား တစ်ကားပြနေတာကို တွေ့လိုကတ်ယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်နေတဲ့ ပရိသတ်ဆီက ဘာရီသမှံ မကြားရဘူး။
ပုံစတူံ အင်္ကျီ၊ ပုံစတူံညှပ်ထားတဲ့ ဆံပင်နဲ့ လူအိုတစ်ချို့ ဆိုဖာပေါ်မှာစောင်းစောင်းရွဲ့ရွဲ့ ထိုင်နေကြတယ်။ ငူငငိူုင်ငိုင် ထိုင်နေတဲ့ အဘွားအိုတစ်ယောက် ပါးစပ်က တစ်တွတတ်ွတ်ရွတ်ေနတယ်။ တုနခ်ျိချိ အဘွားအို တစ်ယောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျနေတဲ့ မုန့်ကို ကုန်းကောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ မြင်ကွင်း တွေကို သားအကြည့် လွဲပြီး နေရောင်ရတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းကိုအမေ့အတွက် ရွေးလိုကတ်ယ်။ အခန်းပြတင်းပေါက်က အပြင်ကို လှမ်း ကြည့်မိတော့ သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာ လက်တွန်းလှည်းနဲ့ နပ်စ်တစ်ချို့ကို တွေ့လကိုတယ်။ ပျင်းရိပျင်းတွဲ ညနေခင်းရဲ့ မှန်ိဖျော့ဖျော့ အလင်းရောင်အောက်မြင်ကွင်း က မြင်ရသူအဖို့ ရင်နင့်စရာကောင်းလှတယ်။
“အမေ.. သား .. သွားတော့မယ်” သူ့နတှုဆက်စကားကို အမေ ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။ တုနရ်ီနေတဲ့ လက်နဲ့ဝှေ့ယမ်းပြတယ်။ သွားမရှိတော့တဲ့ ပါးစပ်ကို ဟပြီး တစ်ခခုပြောဖို့ ကြိုးစားတယ်။ အမေ.. ဆံပင်တွေတောင် ငွေရောင်သမ်းခဲ့ပါပေါ့လား.. မျက်လုံးထောင့်က အရစ်ကြောင်းတွေတောင် နက်သထက် နက်ဝင်ခဲ့ပါပေါ့လား... အမေ တကယ်အိုခဲ့ပါပေါ့လား.... သားတို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင် အမေ (၁) အဲဒီတုန်းက သူ(၆)နှစ်။ ကိစတ္စ စ်ခေုကြာင့် အမေခရီးထွကရ်မယ်ဆိုလို့ သူက့ို ဦးလေးအိမ်မှာ ခဏ သွားအပ်ခဲ့တယ်။ ပစ္စည်းတွေယူပြီး အမေသွားဖို့ပြင်တော့ ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ အမေ့ အင်္ကျီိကိုဆွဲပြီး သူအော်ငိုတော့တယ်။
“ အမေ.. သားကို ခွဲမသွားပါနဲ.့ ..အမေ သားကို ထားမသွားပါနဲ့” ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေတဲ့ သူက့ို အမေ ထားမသွားရက်ခဲ့ဘူး။ အမေ့လက်ကို
ဆွဲပြီး ဦးလေးအိမ်က ထွက်လာတော့ ခြံတံခါးကို သူဆွဲပိတခ်ဲ့လိုကတ်ယ်။ သူ့ကို ထားခဲ့ဖို့ လာသွားတယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကြီး တစ်သက်လုံး ကပ်ညှိမလာအောင် တံခါးဝဖက်ကို သူယောင်လို့တောင် လဲမကြည့်ခဲ့ဘူး ။ (၂) အိမ်ထဲ ၀င်လိုက်တာနဲ့ မိန်းမနဲ့ ယောက္ခမက အမေ့အခန်းထဲက ပစ္စည်းတွေကို လွင့်ပစ်ဖို့ သိမ်းနေတာနဲ့ သွားတိုးတယ်။ ၂ပေမြင်တဲ့ ဒိငုးဆုတစ်ခ.ု ... အထက်တန်းတုန်းက “ကျွန်တော်၏ မိခင်” ဆိုတဲ့ စာစီစာကုံးနဲ့ သူ ပထမဆုရထားတဲ့ ဒိုင်း ဆုလေး။ အဘိဓာန် စာအုပတ်စ်အုပ.် .. အမေ့ချွေးနဲစာနဲ့ ၀ယ်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော မွေးနေ့လက်ဆောင်။ အကြောပြေ လိမ်းဆေးတစ်ဘူး...အမေ အိပ်ရာမ၀င်ခင် လိမ်း တတ်တဲ့ဆေး... လိမ်း ပေးမဲ့သူ မရှိဘဲ အမေ့ကို ဒီဆေးပေးလိုက်တော့လဲ ဘာထူးမှာလဲ...
“တော်ပြီ.. မသိမ်းကြပါနဲ့တော့” သူ အော်လိုကမ်ိတယ်။ “ဒီလောက်များတဲ့ အမှိုက်တွေ မပစ်ထုတ်ရင် ငါ့ပစ္စည်းတွေ ဘယ်နားသွားထားရမလဲ” ယောက္ခက စူးစူးဝါးဝါး ကြည့်ရင်း ပြန်အော်တယ်။ “ဟုတ်ပါ့.. အဲဒီကုတင်စုတ်ကြီးလည်း ပစ်ထတ်ုလကိုစမ်းပါ။ မနက်ဖြန်ကျမှ အမေ့အတွက် သမီး ကုတင်အသစ်တစ်လုံး ၀ယ်ပေးမယ်နော်”
ကုတင်ခေါင်းရင်းမှာ ထောင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို သူတွေ့လကိုတယ်။ အဲဒီပုံက သူက့ို အမေ ကစားကွင်း လိုက်ပတို့န်း က ရိက်ုထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ “ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့်အမေရဲ့ အမွေတွေ... တစ်ခုမှ မပစ်နငိုဘူး” “ဒါ ဘာအချိုးလဲ.. ဘာလို့ အမေ့ကို ပြန်အော်ရတာလဲ.. အမေ့ကို ချက်ချင်းတောင်းပန်လိုက်”
“မင်းကို ငါ လက်ထပ်ခဲ့တာနဲ့ မင်းအမေကို ချစ်ရမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ငါ့ကို လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ငါ့အမေကို မင်း မချစ်ခဲ့ရတာလဲ”
(၃) မိုးရွာပြီးစမို့ ညက ပိေုအးစက်နေတယ်။ လူသကူင်းရှင်းတဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ ကားလေးတစ်စီး မြို့ပြင်က လူအိုရုံဖက် ဦးတည်ပြီး တရိပ်ရပ်ိပြေးနေတယ်။ လူအိုရုံရောက်တော့ ကားပေါ်က အမြန်ဆင်းပြီး အမေ့အခန်းဖက် သူပြေးသွားလိက်ုမိတယ်။ သူလ့  က်ထဲမှာ အမေ အမြဲလိမ်းတတ်တဲ့ အကြောပြေဆေးဘူးကို တင်းတင်း ဆုပ်ကိုငထ်ားတယ်။
“အမေ.. ဆေးကျန်ခဲ့လို့ သားလာပိတု့ာ” အမေ့ကုတင်ရှေ့ သူဒူး ထောက်ချလိမမ့်ိတယ်။ “မိုးချုပ်နေပြီ သားရယ်.. မနက်ဖြန် အလုပ်ရှေိ သးတယ် မဟုတလ်ား..ပြန်ပါသား.. ဆေးကို အမေ့ဘာသာ လိမ်း လို့ရတယ်”
“အမေ.... ” သူ့အသံတွေ လည်ချောင်းဝမှာ တစ်ဆို့နေတယ်။ “အမေ သားကို ခွငလ့်ွတ်ပါ အမေ... သားတို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင်နော်” အိုမင်း ပိန်လှီနေတဲ့ အမေ့ခန္ဓာကိယ်ုကို တင်းတင်းလေး သူဖက်ထားလိမ့်မိတယ်။ သူ့ ပါးပြင်ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေက အဆက်မပြတ် စီးဆင်းလိ.ု့ .. “သားတို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင် အမေ”
အိုသွားတဲ့ တစ်နေ့ “ကလေးရဲ့ ပထမဆုံး သွားတစ်ချောင်းက တစ်နှစန်ဲ့ ဘယ်နစ်ှလမှာ ပေါက်တယ်ဆိုတာကို မှတမ်ိနေပြီး မိဘရဲ့ နောက်ဆုးံ သွားတစ်ချောင်း ဘယ်အချိန်မှာ ကျိုးသွားသလဲ ဆိတုာကိုတော့ မေ့နေတတ်တယ်” ဆေးရုံတစ်ရုံရဲ့ အ၀င်ဝမှာ ရေးကပ်ထားတဲ့ ပိုစတာလေးကို မြင်မှာ ကျွန်မအသိစိတ်တွေ နှိုးထလာတယ်။ အခုခတ်က ငယ်ရယ်ွတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေ ကိယ်ုတိုင်ဝမ်းနာပြီး မွေးထွက်လာတဲ့ ကလေးတွေကပိဲုဂရုစကိုတတ်ကြတယ်။ ကိုယက့်ိုလည်း အမေ၀မ်းနာပြီး မွေးထွက်လာခဲ့တယ် ဆိတုာကို မေ့နေတတ်ကြတယ်။
စနေနေ့ မနက် အိပ်ရာပေါ်မှာ ဇိမ်နဲ့နပ်ှနေတုန်း ဖုန်းသံကြောင့် ကျွန်မ အိပ်မက်က လန့်နှးို လာခဲ့တယ်။ အမေဆီက ဖုန်းပါ။ ကလေးတွေခေါ်ပြီး အမေ့အိမ်မှာ နေ့လယ်စာ သွားစားဖို့ ဆက်လိုကတ်ာဖြစ်တယ်။
“ကလေးတွေကို မက်ဒေါ်နယ်သွားစားဖို့ ပြောထားပြီးပြီ အမေရဲ့” “အဲဒီပိုကဆ်ံကို ချွေသာလိုက်ပါ သမီးရယ်... ကားမောင်းလာရင် ၁၀မိနစ်ထဲပါ” အမေက မရမက တောင်းဆိုနေတယ်။ ကလေးတွေက အမေချက်တာကို စားချင်မှာ မဟုတဘ်ူး။ ဟမ်ဘာဂါပဲ စားချင်ကြမှာပဲလို့ ကျွန်မ တွေးလိုကမ်ိတယ်။
အမေကို လာမယ်၊ မလာဘူးလို့ မပြောခင် ကျွန်မ တွေဝေနေတုန်းမှာ အကြီးမနဲ့ အငယ်လေးက ဖုန်းပြောနေတဲ့ ကျွန်မကို လာခါပြလိကု၊ ခေါင်းခါပြလိက်ုနဲ့ အဘွားအိမ်ကို မသွားချင်ကြောင်း လုပ်ပြနေတယ်။ သမီးတွေက ရုံးပိတ်ရက် မိသားစု စုံစုံညီညီနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး အတူစားချင်ပုံရတယ်။ “အမေ့မြေးတွေနဲ့ တိုငပ်င်ပြီး သမီး ဖုန်းပြန်ဆက်လိုကမ်ယ် အမေ” “အေးပါ သမီးရယ်” ဖျော့တော့တော့ အသံနဲ့ အမေဖုန်းချသွားတယ် ဆိုရင်ပဲ ကလေးတွေက တစ်ပြိုင်ထဲ “အဘွားအိမ် မသွားချင်ဘူး။ မက်ဒေါ်နယ် သွားစားမယ်လို့ ပြောထားပြီသားပဲ” လို့ ၀ိငုးအော်ကြတယ်။
“အဘွားရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က နေ့လယ်စာ စားဖို့ မဟုတ်ဘူး ။ သူ့မြေးတွေဖြစ်တဲ့ သမီးတိကုို့ ကြည့်ချင်လို့” “အရင်အပတ်ကပဲ သမီးတို့ သွားခဲ့ပြီးပြီလေ မေမေ”
ကျွန်မရှင်းပြတာကို သမီးတွေက လက်ခံချင်ပုံ မရခဲ့ဘူး ။
“တစ်ချိန်မှာ မေမေလဲ အိုသွားတဲ့အခါ သမီးတို့ကို “သမီးတို့ရေ အိမ်ကို လာခဲ့ပါဦး။ မေမေ ကိတမ်ုန့်ဖုတထ်ားတယ်။ မြေးတွေလဲ ခေါ်ခဲ့နော်” လို့ ဖုန်း ဆက်ခေါ်ရင် “ကိတ်မုနက့်ို အပြင်မှာ ၀ယ်စားလဲရတာပဲ အမေ.. သမီးတို့ မအားဘူး” လို့ ပြန်ပြောရင် အခု ဘွားဘွား စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသလို မေမေလဲစတ်ိမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်” လို့ ရှင်းပြတော့ လေးနှစ်သမီးလေးက “သမီး အဲလို မပြောဘူး။ ဟုတက်ဲ့လို့ ပြောမယ် မေမေ” တဲ့။ နောက်ဆုံး သမီးတွေနဲ့ တိုငပ်င်ပြီး နေ့လယ်စာကို မက်ဒေါ်နယ် စားပြီး ညနေစာကို အမေ့အိမ်မှာ စားဖို့ ကျွန်မတို့ ဆံုး ဖြတ်လိုက်တယ်။ ညနေ အိမ်လာခဲ့မယ်လို့ အမေ့ကို ဖုန်းပြန်ဆက်တော့ အမေက “အေး.. ဒါဆိုရင် အမေ ချက်ပြုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုကဉ်ီးမယ်” လို့ ၀မ်းသာအားရ ပြန်ပြောတယ်။ ညနေ အမေ့အိမ်ရောက်တော့ အမေက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ တကုပ်ကုပ်နဲ့ ချက်ပြုပ်နေတယ်။ အမေ့ကိုကူဖို့ ကျွန်မ မီးဖိုထဲဝင်တော့ အမေက ပုခုးံ ကျောတွေ ကိုက်ကြောင်း ပြောပြတယ်။ “ ဆေးခန်းမသွားဘူးလား အမေ၊ ဆေးမလိမ်း ဘူးလား” “သွားလဲ မထူးပါဘူး သမီးရယ်။ ဆေးလိမ်းလဲ မသက်သာပါဘူး” အမေ့စကားကို ကြားမှ အမေလိုအပ်နေတာ ဆေးခန်းတွေ၊ လိမ်း ဆေးတွေ မဟုတဘ်ဲ ကျွန်မတိရုဲ့ ဂရုစိုကမ်ှု၊ ပြုစုမှုဆတိုာကို ကျွန်မ သဘောပေါက်တော့တယ်။ အသန့်အပြန့် ကြိုက်တဲ့ အမေ့ရဲ့ မီးဖိုချောင်က အိုးတွေဟာလဲ ဆီချေးတွေ အထပ်ထပ် ပေနေတာကို ကျွန်မ သတိထားမိလကိုတယ်။ အိုးတွေကို တိက်ုချွတ်ဆေးနေရင်း “အိုးတွေကို တိက်ုချွတ်ဖို့ အမေအားတွေ မရှိတော့လို့ဖြစ်မယ်” လို့ ကျွန်မ စဉ်းစားလိက်ုမိတယ်။
အရင်တုန်း က လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မကို ချီပိုးရင်း၊ ကျန်လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်ခတဲ့ အမေ... အိမ်ရှေ့၊ အိမ်နောက်၊ အိမ်ထောင့်တွေပါ မကျန် သပ်ရပ်သန်ရ့ှင်းအောင် အမြဲရှင်းလင်းတတ်တဲ့ အမေ..... အခုခါမှာတော့ ဇရာထောင်းပြီး လက်တွေလဲ အင်အားချိခဲ့ပါပြီ။ ဒါတောင် သူချစ်တဲ့ သားသမီးမြေးတွေကို ကိယ်ုတိုငခ်ျက်ပြုပ် ကျွေးမွေးချင်နေတုန်းပါပဲ။
ကျွန်မ ဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်းပြီး၊ အလုပ်များနေပါစေ အချိန်တစ်ချိန်ကန်သ့  တ်ပြီး အမေ့အိမ်ကို အမြဲပြန်ပြီး အိုးတွေကို တိုက်ေဆးပေးမယ်ဖို့ ကျွန်မ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချလိက်ုမိပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန် ကျွန်မ အိုသွားတဲ့တစ်နေ့၊ လက်တွေ လှုပ်ရှားဖို့ အားအင် နည်းသွားတဲ့အခါ သားသမီးတွေလည်း အိမ်ကို အမြဲပြန်လာပြီး အိုးတွေ တိက်ုဆေးပေးဖို့ ကျွန်မ မျှော်လင့်မပိါတယ်။
amay love myittar